Myanmar Win2Gold Medals in Sepak Takraw Doubles Final at 16th Asian Game 2010 | Myanmar Celebrity Gossip & News
Myanmar Win2Gold Medals in Sepak Takraw Doubles Final at 16th Asian Game 2010
Myanmar's gold medal winners from left, Phyu Phyu Than, May Zin Phyoe and Kyu Kyu Thin, celebrate after winning the women's sepak takraw doubles final at the 16th Asian Games in Guangzhou, China, Nov. 27, 2010. Myanmar's Kyu Kyu Thin, left, and May Zin Phyoe celebrate after winning the women's sepak takraw doubles final at the 16th Asian Games in Guangzhou, China.
Myanmar's men's team from left to right, Zaw Zaw Aung, Si Thu Lin, and Zaw Lat, celebrate after winning the gold medal in the men's sepak takraw doubles final at the 16th Asian Games in Guangzhou, China, Saturday, Nov. 27, 2010. Myanmar's Zaw Zaw Aung, left, and Si Thu Lin, right, celebrate after winning the men's sepak takraw doubles final at the 16th Asian Games in Guangzhou, China. Myanmar's Zaw Lat, left, kicksashot to South Korea's Lee Gyu Nam, right, during the men's sepak takraw double final match at the 16th Asian Games.
တရုတ်နိုင်ငံ၊ Guangzhou မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၁၆ ကြိမ်မြောက် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာ ပိုက်ကျော်ခြင်း အသင်းဟာ ရွှေတံဆိပ်ဆု (၂) နှစ်ခုကို နိုဝင်ဘာ (၂၇) ရက်နေ့က ဆွတ်ခူး လိုက်ပါပြီ။ နှစ်ယောက်တွဲ ပိုက်ကျော်ခြင်း ဗိုလ်လုပွဲမှာ မြန်မာ အမျိုးသားအသင်းက တောင်ကိုးရီးယား အသင်းကို အနိုင်ရပြီး ရွှေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သလို မြန်မာ အမျိုးသမီး အသင်းကလည်း အိမ်ရှင် တရုတ်အသင်းကို အနိုင်ကစားခဲ့ပြီး ရွှေတံဆိပ်ဆုတွေ အသီးသီး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ ကြတာပါ။ Photos From AP /Wong Maye-E)
ayeyarwaddyNovember 29, 2010 at 11:52 AMမြန်မာအမျိုးသမီးပွဲ လင့်http://www.youtube.com/watch?v=RydaELu6hG8အမျိုးသားပွဲလင့်လေး သိရင်ပြောကြပါ ...ReplyDeletemgNovember 29, 2010 at 3:02 PMCongratulations!မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကျရာနေရာကနေ တာဝန်ကျေပွန်ဆောင်နဲ့ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံ့သားကောင်းများ ဖြစ်ပါစေ။မြန်မာသည် မြန်မာအတွက်ပဲဖြစ်ရမည်။ReplyDeleteloveNovember 29, 2010 at 5:49 PMSeem to say congratulation . By the time i see the myanmar flag stamp make me feel sad.ReplyDeleteYangNovember 29, 2010 at 7:54 PMမိုက်တယ်ကွာ..ReplyDeletebabyNovember 29, 2010 at 8:30 PMအ၇မ်းလဲမိုက်တယ် အ၇မ်းလဲ အားရှိတယ်...မြန်မာသည် မြန်မာအတွက်ပဲဖြစ်ရမည်..... အ၇မ်းဝမ်းသာတယ်.... ဘယ်အဆင့်ပဲရ ရ ဂုဒ်ယူတယ်.....ReplyDeletearkarNovember 30, 2010 at 6:33 PMCongratulationReplyDeleteHenry TunDecember 1, 2010 at 9:43 AMThis is Myanmar, That is ours ,, Well done ! Goden men and women ,, you all are the best.. Cheer!ReplyDeleteMyoMDecember 1, 2010 at 8:53 PMThis is the best new ever.ReplyDeleteChitDecember 2, 2010 at 9:50 PMရွှေတံဆိပ်ရတာတော့ ချီုးကျူးပါတယ်.. မိန်းကလေးပွဲကတော့ သိပ်ကြည့်လို့ မကောင်းဘူး... တရုတ်မလေးတွေကြီးကပဲ တစ်ချိန်လုံးရိုက်နေတာကို ခံနေရတယ်.. မြန်မာက ခေါင်းသာ သွားလို့ တော်သေးတာပေါ့..ReplyDeleteEahDecember 3, 2010 at 10:06 AMhttp://www.youtube.com/watch?v=BaKHVU8oZZMhttp://www.youtube.com/watch?v=QW_pxj2_y1Uအပေါ်က လင့်ခ်တွေကတော့ အမျိုးသားသုံးယောက်တွဲ မြန်မာ-ထိုင်းပွဲပါ။ReplyDeleteAdd commentLoad more...